India: Ny Ankizivavy Kely Ao Kanchipuram Sy Ireo Sary Hafa · Global Voices teny Malagasy
India: Ny Ankizivavy Kely Ao Kanchipuram Sy Ireo Sary Hafa
Voadika ny 18 Aogositra 2017 3:07 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jona 2007)
Nitsidika ny tanàna masin'i Kanchipuram izay ahitàna ireo tempoly marobe i Keerthivasan [Tamoul] avy any Chennai. Olona tia sary, naka sary marobe izy saingy sary iray ihany no nakariny ho ao amin'ny aterineto. Tsy nisafidy ny haka io sary io akory aza izy. Raha iny mbola sahirana naka sary elefanta teo amin'ny tempoly iny izy, no indro nisy mpandalo iray nibaiko azy mba haka sary tovovavy kely iray izay niaraka taminy. Tsy nandà i Keerthivasan, fa avy dia nanaiky ary naka io sary io.
Raha vao azo ny sary, tonga dia lasa nankany an-tempoly ilay ramatoa – Brahmine Iyengar – sy ilay zazavavy kely. Nanontany azy noho izany ny renin'i Keerthivasan raha toa ka naka ny adiresin'ilay olona izy. Nosoratan'i Keerthivasan fa tsy tadidiny akory na dia ny endrik'ilay ramatoa aza sady tsy nasehony azy ireo akory ny sary nomerika teo amin'ny fakantsariny. Dia ahoana? hoy Keerthivasan nanontany tena. Saingy toa tsikariny ho te-hilaza zavatra aminy ilay sary. Inona, tsy fantany io. Ahoana no hevitrareo?
Baranee [Tamoul] avy any Coimbatore ao India, miasa amina sambo ka mandehandeha be noho izany. Mpaka sary matianina io, lasa adala amin'ny filentehan'ny masoandro. Indraindray, zarainy ny sary iray izay nalainy mandritra ireo diany nitety ny lafivalon'izao tontolo izao. Ity iray ity izao nalainy tany Torkia. Soratan'i Baranee hoe: “Ny fijerin'ilay zazavavy kely Tiorka. Anaty fifantohana lalina izy no nijery ireo mpiara-mianatra aminy nandihy. Io fifantohana io no nahasarika ahy.”
Marakkanam Bala [Tamoul] avy any Pondichéry, dia mpanao gazety ary manaraka azy amin'izay alehany foana ny fakantsariny. Manefy finamànana amin'ireo olona eny an-dalambe izy ary manoratra fitantaràna manohina fo mikasika ireo fihaonany. Azo vakiana eto ny lahatsorany miresaka lahy antitra iray 105 taona voatery mangataka eny andalambe. Tao an-tanàna nahaterahany, naka ity sarina zazavavy kely misafotafota amin'ny voankazo-na palmiers Palmira natono ity i Marakkanam Bala.